Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » AmaTshayina e-Commerce Giant ukuseta iNqwelomoya entsha
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase China eziQhekezayo • iindaba • abantu • Shopping • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Umsunguli weJD.com uRichard Li
Ukusekwa kwenqwelomoya wenqwelomoya omtsha kuza njengembangi yeJD.com yokuthenga kwi-Intanethi iAlibaba Group ebambe i-LTd ibisandisa izixhobo zayo. I-YTO Cargo Airlines, ephethwe yiAlibaba exhaswa yi-YTO Express, yazisa ngenqwelomoya abaguquliweyo ukusuka kwi-767 kunye ne-777.
Inqwelomoya wenqwelomoya omtsha uzakusekwa kwiphondo lase China lase Jiangsu.
UJiangsu Jingdong Cargo Airlines ufumene iimvume zokuqala zokumilisela umphathi omtsha.
I-airline icwangcisa ukusebenzisa i-Boeing 737-800 iinqwelomoya.
The Ulawulo lwezoLuntu lwaseChina (CAAC) ibhengeze ukuba uSuqian Jindong Zhanrui woLawulo lweShishini, olawulwa ngu JD.com umseki uRichard Liu, unikwe imvume yokuseka inqwelomoya yenqwelomoya entsha esephondweni le Jiangsu.
I-Jiangsu Jingdong Cargo Airlines, enemali eyinkunzi ebhalisiweyo ye-yuan yezigidi ezingama-600 ($ 92.83 yezigidi), ifumene iimvume zokuqala zokumisela umphathi omtsha, utshilo umlawuli wezokundiza wase China kwisaziso.
Inkampani elawulwa ngumseki we-e-commerce enkulu yase-China i-JD.com Inc. iya kufaka igalelo kwi-75% yenkunzi eyisiseko ngelixa iQela leZikhululo laseNantong, isixeko esiseJiangsu, siza kubonelela ngentsalela, ngokweCAAC.
Ngokwenqaku leCAAC, inqwelo moya entsha iceba ukusebenzisa inqwelo moya yeBoeing 737-800 kwizithuthi zayo.
I-Boeing, ebitsala nzima e-China ngentengiso yeenqwelomoya zabakhweli, ilawula intengiso yenqwelomoya kwihlabathi liphela.
Iirhafu zokuthuthwa komoya ziye zanyuka, ziqhutywa ngokuyinxalenye kukwanda okwenyuswe ubhubhane wentengiso ye-Intanethi.